Soomaaliya iyo lix waddan oo kale oo dhoolatus milatari sameynaya iyo ujeedka - Caasimada Online
Home Warar Soomaaliya iyo lix waddan oo kale oo dhoolatus milatari sameynaya iyo ujeedka
Soomaaliya iyo lix waddan oo kale oo dhoolatus milatari sameynaya iyo ujeedka
Muqdisho (Caasimada Online) – Soomaaliya ayaa ku biireysa lix waddan oo ku dhawaaqay inay sameyn doonaan dhoolatus militari oo ujeedkiiisu yahay sidii kor loogu qaadi lahaa ammaanka dalalka ku teedsan Badda Cas.
Dalallka lixda ah ee dhoolatuskaan sameenayo ayaa kala ah Masar, Sacuudiga, Urdun, Suudaan, Jabuuti, Yemen iyo kormeerayaal ka socda Soomaaliya.
Admiral Yahya bin Mohammed Al-Asiri oo ah taliyaha Ciidanka galbeedka dalka Sacuudga ayaa xusay in dalalka ku teedsan Badda cas ay is-dhaafsan doonaan khibrado sare loogu qaadayo amniga baddaha iyo xoriyadda socdaalka badda cas.
Taliyaha howlgalkaan hoggaamin doono oo lagu magacaabo Admiral Yahya ayaa sheegay in lixda waddan ay muujinayaan muhiimadda marin-biyoodku u leeyahay adduunka oo dhan.
Admiral Yahya ayaa sheegay in marin biyoodkaan uu yahay marin-biyood dhaqaale fiican leh sidaas darteedna ay u go’aansadeen inay sameeyaan dhoola-tuskaan si ay usoo jiitaan adduunka intiisa kale.
Lixda wadan ee ka qeybgalayo dhoolatuska militari ayaa waxay ku midaysan yihiin isbaheysi lagu horumarinayo iskaashiga siyaasadda, dhaqaalaha iyo amniga.
Dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaan weli ka hadlin warka kasoo baxay Admiral Yahya, balse waxay noqon doontaa dhoola-tuskii ugu horreeyey ee dalal badan ah oo muddo ay ka qeyb gasho Soomaaliya.